Book Reflection: Death By Meeting by Peter Lencioni
Business Help & Support Management Upgrade Yourself
Wynee စာအုပ်အညွှန်း- စာရေးသူ Peter Lencioni ရဲ့ Death by Meeting
Wynee ရဲ့ စာအုပ်အညွှန်းတင်ဆက်မှုအပိုင်းဆက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေက Wynee ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ခေတ်နဲ့အညီ နောက်ဆုံးပေါ်အတွေးအခေါ်တွေ၊ အတွေးအမြင်တွေပါဝင်တဲ့ စာရေးဆရာတွေကို ယူဆောင်လာပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်အလိုက် စာအုပ်တွေကို အညွှန်းရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
အလားအလာရှိတဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ရာထူးမြင့်မားသူတွေအတွက် စာရေးသူ Peter Lencioni ရဲ့ Death by Meeting: A Leadership Fable … about Solving the Most Painful Problem in Business စာအုပ်က အစည်းအဝေးတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရာမှာ အင်မတန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှာ ဖော်ပြထားသလိုပဲ ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ မကြာခဏရှုမြင်ကြတဲ့အစည်းအဝေးတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့သာ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပြည့်ရှိပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ Lencioni က ပြောပြထားပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ထဲမှာ Lencioni က မကြာသေးခင်ကမှ လုပ်ငန်းစုကြီးကြီးတစ်ခုကနေ ၀ယ်ယူခံခဲ့ရတဲ့ ဂိမ်းကုမ္ပဏီ Yip Software ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Casey ရဲ့ အစည်းအဝေးတွေကို တိုးတက်မှုရှိအောင်နဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို စိတ်အားထက်သန်မှုရှိလာအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ Casey ကို ကူပေးနေတဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူငယ်အလုပ်သင်လည်းဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာ ဘွဲ့ရတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Will ဆိုတာရှိပါတယ်။ Will က အစည်းအဝေးတွေကို ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး Casey ကို ကူညီဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
Will က ဘာပြောလဲဆိုရင် ရုပ်ရှင်တွေထက် အစည်းအဝေးတွေက ပိုပြီးတော့ ပျော်ဖို့ကောင်းသင့်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစည်းအဝေးတွေမှာ လူတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ထိတွေ့ပတ်သက်နေရပြီး ပါဝင်သူတွေပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိနေပေမယ့် ရုပ်ရှင်တွေမှာကျတော့ ပရိသတ်တွေက တိုက်ရိုက်မရှိနေဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေက ပျင်းစရာကောင်းပြီး အကျိုးရလဒ်မထွက်ဘူးဆိုတာက ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ ဇာတ်ထုပ်ပဋိပက္ခနဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ ဆိုတဲ့ အဓိကအချက်နှစ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ Will က ထောက်ပြပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိသင့်တယ်လို့ Will က ပြောပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း၊ အပတ်စဉ်ဗျူဟာ၊ လစဉ်မဟာဗျူဟာနဲ့ သုံးလတစ်ကြိမ်သုံးသပ်မှု ဆိုပြီး အစည်းအဝေးပုံစံ လေးမျိုးရှိတယ်လို့ Will က ပြောပါတယ်။ အစည်းအဝေး တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အချိန်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံက ယင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။ အောက်ပါဇယားက အစည်းအဝေးလေးမျိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအနှစ်ချုပ်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၅ - ၁၀ မိနစ်
၄၅ - ၉၀ မိနစ်
၂ - ၄ နာရီ
၁ - ၂ ရက်
အစီအစဉ်ကို အစည်း အဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ရန်
အပတ်စဉ်လုပ် ဆောင်ချက်တွေနဲ့ တိုင်းတာချက်တွေကို သုံးသပ်ရန်နဲ့ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ အဟန့်အတားတွေနဲ့ ပြဿနာရပ်တွေ ကိုဖြေရှင်းရန်
ရေရှည်မှာ အောင်မြင်မှုကို သက်ရောက်နိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာ ရပ်တွေကို ဆွေးနွေး၊ ပိုင်းခြား စိတ်ဖြာ၊ စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ် ချက်ချရန်
မဟာဗျူဟာ၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အနေအထား၊ လုပ်ငန်းရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ အဓိကပါဝင်သူ တွေ၊ အသင်းအ ဖွဲ့တိုးတက်ရေး တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်
မဟာဗျူဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာရပ် တွေကို မဖြေရှင်းပါနဲ့
အရေးပေါ်ကိစ္စရပ် တွေအတွက် လိုအပ် သလို စီစဉ်နိုင်
အချိန်ဇယားကို အလွန်အမင်းဖွဲ့ စည်းတာ၊ ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုးဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့
ဒါက ပျင်းရိစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ တင်ပြထားတဲ့ ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများမှာ အရေးပါတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခကို ကြောက်တဲ့စိတ်ကို အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို မဖော်ပြထားပါဘူး။ Lencioni ရဲ့ နည်းလမ်းတွေက အဲဒီလိုပဋိပက္ခတွေကို သင့်တင့်မျှတစွာတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်မရှိဘဲနဲ့ အစည်းအဝေးကနေ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရရှိဖို့ ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ပဋိပက္ခဆိုတာ မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါက မှန်ကန်တဲ့ဦးတည်ချက်အတွက် ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပဲဆိုတာကို ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်ဖက်လုံးက လက်ခံရပါမယ်။
ကျင့်သုံးဖို့ ဒုတိယအသုံးဝင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုက ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကို အစည်းအဝေးတစ်မျိုးထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုက်တာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အလုပ်ခွင်မှာ ဒီလိုမျိုးတွေပဲ အချိန်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဥပမာအနေနဲ့ အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးမှာဆိုရင် မဟာဗျူဟာကျကျဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကို နောက် လစဉ်၊ သို့မဟုတ် သုံးလတစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးမှာ သေသေချာချာဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဘေးမှာချန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ထားထားသင့်ပါတယ်။ ဒါက အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့အသုံးစရ်ိတ် ပေါ်လစီ၊ ဒါမှမဟုတ် ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းသင့်မပူးပေါင်းသင့် စတဲ့ အရေးကြီးမှုအတိုင်းအတာမတူတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကြားမှာ ဟိုရောက်လိုက်၊ ဒီရောက်လိုက် ဆွေးနွေးဖို့က အတော်ဆုံးအမှုဆောင်အရာရှိတွေအတွက်တောင် ခက်ခဲပါတယ်။
ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင် အစည်းအဝေးတွေအနေနဲ့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသင့်သလောက် မဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ မထင်မရှားပြဿနာရပ်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ Lencioni က ကြိုးစားထားပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတော်တော်များများက ကြောက်ရွံ့ကြတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုနဲ့ စတင်ခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုပုံစံကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့သူတွေအတွက် ဒီစာအုပ်က ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယ ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
Sugasini Kandiah က ရန်ကုန်မြို့မှာ နှစ်နှစ်ကျော်ကြာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို သင်ယူရတာကို သဘောကျပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခရီးစဉ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအနေနဲ့ ပါဝင်ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ပါတယ်။
Wynee စာအုပျအညှနျး- စာရေးသူ Peter Lencioni ရဲ့ Death by Meeting
Wynee ရဲ့ စာအုပျအညှနျးတငျဆကျမှုအပိုငျးဆကျမှာ မွနျမာနိုငျငံက ပရျောဖကျရှငျနယျတှကေ Wynee ရဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှကျ ခတျေနဲ့အညီ နောကျဆုံးပျေါအတှေးအချေါတှေ၊ အတှေးအမွငျတှပေါဝငျတဲ့ စာရေးဆရာတှကေို ယူဆောငျလာပေးတဲ့ ခေါငျးစဉျအလိုကျ စာအုပျတှကေို အညှနျးရေးပေးတာဖွဈပါတယျ။
အလားအလာရှိတဲ့ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျတှေ၊ စီမံခနျ့ခှဲမှုပိုငျးဆိုငျရာ ရာထူးမွငျ့မားသူတှအေတှကျ စာရေးသူ Peter Lencioni ရဲ့ Death by Meeting: A Leadership Fable … about Solving the Most Painful Problem in Business စာအုပျက အစညျးအဝေးတှကေို ဘယျလိုလုပျဆောငျသငျ့တယျဆိုတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွနျလညျစဉျးစားဆငျခွငျရာမှာ အငျမတနျအသုံးဝငျပါတယျ။ ခေါငျးစဉျမှာ ဖျောပွထားသလိုပဲ ခွောကျကပျကပျနဲ့ ပငျြးစရာကောငျးတယျလို့ မကွာခဏရှုမွငျကွတဲ့အစညျးအဝေးတှကေို နညျးမှနျလမျးမှနျနဲ့သာ လုပျဆောငျနိုငျမယျဆိုရငျ တကယျကို စိတျဝငျစားဖှယျအပွညျ့ရှိပွီး ပြျောဖို့ကောငျးတဲ့အထိဖွဈလာနိုငျတယျလို့ Lencioni က ပွောပွထားပါတယျ။
ဒီစာအုပျထဲမှာ Lencioni က မကွာသေးခငျကမှ လုပျငနျးစုကွီးကွီးတဈခုကနေ ဝယျယူခံခဲ့ရတဲ့ ဂိမျးကုမ်ပဏီ Yip Software ရဲ့ CEO ဖွဈသူ Casey ရဲ့ အစညျးအဝေးတှကေို တိုးတကျမှုရှိအောငျနဲ့ ဝနျထမျးတှကေို စိတျအားထကျသနျမှုရှိလာအောငျ ကွိုးပမျးခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးကို ပွောပွပါတယျ။ ဒီဇာတျလမျးထဲမှာ Casey ကို ကူပေးနတေဲ့ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ လူငယျအလုပျသငျလညျးဖွဈ၊ ရုပျရှငျပိုငျးမှာ ဘှဲ့ရတဈဦးလညျးဖွဈတဲ့ Will ဆိုတာရှိပါတယျ။ Will က အစညျးအဝေးတှကေို ရုပျရှငျတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး Casey ကို ကူညီဖို့ ကွိုးစားပါတယျ။
Will က ဘာပွောလဲဆိုရငျ ရုပျရှငျတှထေကျ အစညျးအဝေးတှကေ ပိုပွီးတော့ ပြျောဖို့ကောငျးသငျ့ပါတယျ၊ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အစညျးအဝေးတှမှော လူတှကေ တဈဦးနဲ့တဈဦး ထိတှပေ့တျသကျနရေပွီး ပါဝငျသူတှပေျေါမှာ တိုကျရိုကျသကျရောကျမှုရှိနပေမေယျ့ ရုပျရှငျတှမှောကတြော့ ပရိသတျတှကေ တိုကျရိုကျမရှိနဘေူးလို့ ပွောပါတယျ။ အစညျးအဝေးတှကေ ပငျြးစရာကောငျးပွီး အကြိုးရလဒျမထှကျဘူးဆိုတာက ရုပျရှငျကားကောငျးတဈခုမှာရှိတဲ့ ဇာတျထုပျပဋိပက်ခနဲ့ ဇာတျလမျးရဲ့ဖှဲ့စညျးပုံ ဆိုတဲ့ အဓိကအခကျြနှဈခကျြမရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့လို့ Will က ထောကျပွပါတယျ။ အစညျးအဝေးတှမှော ပါဝငျတဲ့အသငျးအဖှဲ့အနနေဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပါဝငျဆှေးနှေးနိုငျတဲ့ ပဋိပက်ခဆိုတာ အမွဲတမျးရှိသငျ့တယျလို့ Will က ပွောပါတယျ။
ဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ပတျသကျပွီး အသငျးအဖှဲ့တှအေနနေဲ့ နစေ့ဉျမှတျတမျး၊ အပတျစဉျဗြူဟာ၊ လစဉျမဟာဗြူဟာနဲ့ သုံးလတဈကွိမျသုံးသပျမှု ဆိုပွီး အစညျးအဝေးပုံစံ လေးမြိုးရှိတယျလို့ Will က ပွောပါတယျ။ အစညျးအဝေး တဈခုခငျြးစီရဲ့ အခြိနျနဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံက ယငျးရဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ ကိုကျညီသငျ့ပါတယျ။ အောကျပါဇယားက အစညျးအဝေးလေးမြိုးရဲ့ဖှဲ့စညျးပုံအနှဈခြုပျကို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
၅ - ၁၀ မိနဈ
၄၅ - ၉၀ မိနဈ
၁ - ၂ ရကျ
အစီအစဉျကို အစညျး အဝေးမှာ ဆုံးဖွတျရနျ
အပတျစဉျလုပျ ဆောငျခကျြတှနေဲ့ တိုငျးတာခကျြတှကေို သုံးသပျရနျနဲ့ နညျးဗြူဟာဆိုငျရာ အဟနျ့အတားတှနေဲ့ ပွဿနာရပျတှေ ကိုဖွရှေငျးရနျ
ရရှေညျမှာ အောငျမွငျမှုကို သကျရောကျနိုငျတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ပွဿနာ ရပျတှကေို ဆှေးနှေး၊ ပိုငျးခွား စိတျဖွာ၊ စဉျးစားပွီး ဆုံးဖွတျ ခကျြခရြနျ
မဟာဗြူဟာ၊ ယှဉျပွိုငျနိုငျတဲ့ အနအေထား၊ လုပျငနျးရဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှေ၊ အဓိကပါဝငျသူ တှေ၊ အသငျးအ ဖှဲ့တိုးတကျရေး တှကေို ပွနျလညျ သုံးသပျရနျ
မဟာဗြူဟာနဲ့ဆိုငျတဲ့ ပွဿနာရပျ တှကေို မဖွရှေငျးပါနဲ့
အရေးပျေါကိစ်စရပျ တှအေတှကျ လိုအပျ သလို စီစဉျနိုငျ
အခြိနျဇယားကို အလှနျအမငျးဖှဲ့ စညျးတာ၊ ဝနျထုပျ ဝနျပိုးဖွဈအောငျ မလုပျပါနဲ့
ဒါက ပငျြးရိစရာကောငျးတဲ့ခေါငျးစဉျကို စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးတဲ့နညျးနဲ့ တငျပွထားတဲ့ ဖတျသငျ့တဲ့စာအုပျဖွဈပါတယျ။ ဒါက အထူးသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အဖှဲ့အစညျးတျောတျောမြားမြားမှာ အရေးပါတဲ့ ကိစ်စရပျတဈခုဖွဈတဲ့ ပဋိပက်ခကို ကွောကျတဲ့စိတျကို အသငျးအဖှဲ့အနနေဲ့ ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲဆိုတာကို မဖျောပွထားပါဘူး။ Lencioni ရဲ့ နညျးလမျးတှကေ အဲဒီလိုပဋိပက်ခတှကေို သငျ့တငျ့မြှတစှာတှေးတောဆငျခွငျနိုငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈဦးရှိဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးခေါငျးဆောငျ တဈယောကျမရှိဘဲနဲ့ အစညျးအဝေးကနေ ပိုကောငျးတဲ့ရလဒျတှရေရှိဖို့ ဘာတှလေုပျနိုငျလဲဆိုတာက ရှငျးရှငျးလငျးလငျး နားမလညျနိုငျပါဘူး။ ပဋိပက်ခဆိုတာ မကောငျးတဲ့အရာမဟုတျဘူး၊ အဲဒါက မှနျကနျတဲ့ဦးတညျခကျြအတှကျ ခွလှေမျးတဈလှမျးပဲဆိုတာကို ဝနျထမျးတှနေဲ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုပိုငျးကပုဂ်ဂိုလျတှနှေဈဖကျလုံးက လကျခံရပါမယျ။
ကငျြ့သုံးဖို့ ဒုတိယအသုံးဝငျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုက ဆှေးနှေးဖို့လိုအပျနတေဲ့ ကိစ်စရပျပုံစံအမြိုးမြိုးကို အစညျးအဝေးတဈမြိုးထဲမှာ ထညျ့သှငျးလိုကျတာမြိုးကို ရှောငျကွဉျရပါမယျ။ အလုပျခှငျမှာ ဒီလိုမြိုးတှပေဲ အခြိနျတိုငျးဖွဈနတေယျဆိုရငျ ဥပမာအနနေဲ့ အပတျစဉျအစညျးအဝေးမှာဆိုရငျ မဟာဗြူဟာကကြဖြွရှေငျးရမယျ့ကိစ်စရပျတှကေို နောကျ လစဉျ၊ သို့မဟုတျ သုံးလတဈကွိမျ အစညျးအဝေးမှာ သသေခြောခြာဖွရှေငျးဖို့အတှကျ ဘေးမှာခနျြထားတဲ့ စညျးကမျးကို ထားထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါက အရေးကွီးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကုမ်ပဏီရဲ့အသုံးစရိတျ ပျေါလစီ၊ ဒါမှမဟုတျ ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးသငျ့မပူးပေါငျးသငျ့ စတဲ့ အရေးကွီးမှုအတိုငျးအတာမတူတဲ့ ခေါငျးစဉျတှကွေားမှာ ဟိုရောကျလိုကျ၊ ဒီရောကျလိုကျ ဆှေးနှေးဖို့က အတျောဆုံးအမှုဆောငျအရာရှိတှအေတှကျတောငျ ခကျခဲပါတယျ။
ခွုံငုံပွောရမယျဆိုရငျ အစညျးအဝေးတှအေနနေဲ့ အကြိုးဖွဈထှနျးသငျ့သလောကျ မဖွဈထှနျးစတေဲ့ မထငျမရှားပွဿနာရပျတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ Lencioni က ကွိုးစားထားပါတယျ။ ဝနျထမျးတျောတျောမြားမြားက ကွောကျရှံ့ကွတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတဈခုနဲ့ စတငျခွငျးအားဖွငျ့ ကုမ်ပဏီရဲ့လုပျငနျးယဉျကြေးမှုပုံစံကို တိုးတကျအောငျလုပျဖို့ရညျမှနျးထားတဲ့သူတှအေတှကျ ဒီစာအုပျက ဖတျရမယျ့စာအုပျဆိုတာ ယုံမှားသံသယ ဖွဈစရာမလိုပါဘူး။
Sugasini Kandiah က ရနျကုနျမွို့မှာ နှဈနှဈကြျောကွာ အလုပျလုပျကိုငျနတေဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုပိုငျးဆိုငျရာ ပရျောဖကျရှငျနယျတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ သမိုငျးကွောငျးကို သငျယူရတာကို သဘောကပြွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုခရီးစဉျမှာ တဈစိတျတဈဒသေအနနေဲ့ ပါဝငျရတဲ့အတှကျ ပြျောရှငျပါတယျ။
In Wynee’s Review Series, Myanmar professionals review topical books to bring the latest ideas and thought-leading authors to the Wynee community.
For potential CEOs and senior management, Peter Lencioni’s Death by Meeting: A Leadership Fable...about Solving the Most Painful Problem in Business would prove very useful in rethinking how meetings are conducted. As indicated by the title, Lencioni argues that meetings which are often seen as dull and boring can in fact be highly engaging and even fun if conducted in the right way.
In the book, Lencioni tells the story of Casey, the CEO of Yip Software,agaming company that was recently acquired byalarger conglomerate, trying hard to improve meetings and motivate staff. In his quest, Casey is assisted by Will,atalented young intern and film studies graduate who tries to help Casey by comparing films to meetings.
Will argues that meetings should be more fun than films given that meetings are interactive and haveadirect impact on the participant, compared to movies where the audience is passive. Will states that meetings are often boring and unproductive due to the lack of two key elements that good film productions have - conflict and structure. He states that meetings should always have some conflict that the team can engage in openly in the same way that drama is tantamount to any good film.
On structure, Will argues there are four kinds of meetingsateam can have – Daily Check-in, Weekly Tactical, Monthly Strategic and Quarterly Offsite – A meeting’s time and structure should fit its purpose. The table below presents an overview of the proposed meeting structures.
Agenda prepared beforehand
No. Agenda to be decided at the meeting
Discuss, analyze, brainstorm
and decide upon
Review strategy, competitive
trends, key personnel,
Don’t tackle strategic issues
Can organise on ad hoc basis for urgent matters
The book wasaworthwhile read and tackledadry topic in an engaging way, it doesn’t address how teams can overcome fear of conflict, an issue that is systemic to most organisations, particularly in Myanmar – Lencioni’s solution is to ensure there is good leader who can mine out and medicate conflicts appropriately. In the absence of suchaleader, it is unclear what can be done to achieve better meeting outcomes. It may be that having employees and management alike simply acknowledge that conflict is not necessarilyabad thing may beastep in the right direction.
A second useful exercise to practice would be to avoid the tendency to throw every type of issue that needs to be discussed into the same meeting. While this happens all the time in the workplace, we should have the discipline to park aside strategic issues for example, duringaweekly tactical and then ensure the strategic issue is addressed properly during the next Monthly/ Ad Hoc Strategic or Quarterly Offsite. This is important because even the best executives will struggle shifting back and forth between topics of different magnitude, like deciding on the company’s expense policy and whether to merge withacompetitor.
Overall, Lencioni tries to tackle the many nuances that prevent meetings from being as effective as they should be. Undoubtedly, this book would beagood read for anyone looking to improve their company’s corporate culture, by starting with the one activity that most employees dread.
Sugasini Kandiah is an investment professional who has been in Yangon for more than2years. She enjoys learning about Myanmar’s history and is excited to beapart of its current journey in development.
3 Tested Tips foraWorthwhile Reading Experience